January 2013 | IT Sharing Network
ဒီ browsers လေးတွေကတော့ သူငယ်ချင်းအားလုံး သိကြပြီးသား ရှိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း ကိုပြည့်ဖြိုးက ပူဆာနေတာနဲ့ အမြင်ကပ်လို့ သုံးမျိုးလုံးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
လုပ်နည်းကတော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး တခြား အနိမ်ဖုန်းတွေ root လုပ်သလိုပါပဲ zip ဖိုင်လေးနဲ့ ချမယ့် နည်းပါ။
T8830 Pro Build Number b109 နဲ့ဆုံးတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Binary bat file တွေ နဲ့ Root မရတော့ပါဘူး
အခုပြည်လည်ဝေမျှပေးမဲ့ နည်းကတော့ T8830 Pro အားလုံးတွေကို အခက်အခဲမရှိလုပ်နိုင်မှာပါ
Avast! All Version Internet Security + Pro+ Free 7.0.1474.773
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Avast! အသုံးပြုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Version အားလုံးအတွက် Software + Trial Resset 2013 + 2038 အထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Keys + 2050 အထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Lifetime v.2. 2050 ပါမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Avest! ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေ ၀င်းဒိုး Update လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်စေ Activate မဖြစ်တော့တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် Windows Loader 2.2.1 DAZ လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... Support လုပ်နိုင်တဲ့ OS တွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Dropbox, Sharebeast သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
ဒီ root လုပ်နည်းလေးကို chat box က အကိုတစ်ယောက်က မေးထားလို့ ရှာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ အကိုရေ ဒီပို့လေးမှာ ကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Work , Excel , Power Point တို့ကို ဖုန်းပေါ်ကနေ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် သွားရင်းလာရင်း ကွန်ပျူတာမလိုအပ်ပဲ စာရင်း ဇယားတွေကို ဖုန်းပေါ်ကပဲကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထွေထွေထူးထူးမရေးတော့ပါဘူးနော် အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Andriod အတွက် Real Steel HD စက်ရုပ်ဖိုက်တင် Game လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ရုပ်ရှင်ကားလည်း ကြည့်ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ် ဒီ Game လေးကို Android O/S : 2.2+ နှင့်အထက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumpgames.RealSteel ကို Click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Box, Freehostina သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
Internet Download Manager 6.15 Build 1 Final (29.1.2013)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build 1 Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build 1 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Box, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ FixCleaner 2.0.4612.847 မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကွန်ပျူတာရဲ့ error တွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီး hand-pick errors, registry နှင့် startup speed တွေကိုပါပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်... ကျွန်တော့် Blog မိတ်ဆွေများစမ်းသုံးသင့်ပါတယ်... Win 8 မှာပါအသုံးပြုနိုင်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://fixcleaner.com ကို Click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက် Crack + Serial ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Box နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးနီးပါးအသုံးပြုကြတဲ့ VLC Media Player 2.1.0 Nightly 20130127 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Box နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Y220T Research Download (2)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Andriod အတွက် မြို့တစ်မြို့နဲ့ တစ်မြို့ အကွာအဝေးမိုင်ကို တွက်ချက်ဖော်ပြပေးမယ့် City Distance ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ခရီးသွားလေ့ရှိတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Freehostina, Box သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... USB ကနေ Windows တင်ဖို့အတွက် Windows 8 USB Installer Maker v1.0.23.12 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း USB ကနေတင်နည်းလေးရေးသားပေးဖူးပါတယ်... 4G ရှိတဲ့ USB တစ်ချောင်းဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... WinToFlash ကိုသုံးပြီး USB Drive ဖြင့် Window တင်နည်း ကို http://pyayblogger.blogspot.com/2012/04/wintoflash-usb-drive-window.html / USB ကနေအလွယ်တကူ windows တင်ဖို့ WintoBootic V1.2 ကို http://pyayblogger.blogspot.com/2012/06/wintobootic-v12-4596kb.html လင့်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ထဲမှာလည်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားတဲ့ အသုံးပြုနည်း PDF စာအုပ်ပါဝင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Freehostina, Box သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
At least 3-4 Works On V5 for sure. I dont know if they do so for v6 :
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ESET သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီနေ့ထွက်တဲ့ ကီးလေးတွေကို လိုအပ်လျှင် အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
XWLS8 Android 4.1.2 Jelly Bean on Galaxy S2 I9100 root ကြမယ်
XWLS8 Android 4.1.2 Jelly Bean on Galaxy S2 I9100 Root အတွက်နော် အရင်ဆုံး
CCleaner Professional + Business Edition 3.27.1900 (24 Jan 2013)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီသားဖြစ်တဲ့ CCleaner Professional + Business Edition 3.27.1900 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Business Edition နှင့် Professional ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးနိုင်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack + serial ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် zippyshare, solidfiles, Box သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Microsoft Security Essentials အသုံးပြုတဲ့ အသူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ definition update ဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2013 jan 25 ထိ update ပါ။ online ကနေ တိုက်ရိုက် Update လုပ်လျှင်အရမ်းကြာလို့ စ်ိတ်ညစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်နော် exe ဖိုင်လေး run ပေးလိုက်ရုံပါခင်ဗျာ
Samsung Galaxy S2 (GT-I9100) Official Jelly bean 4.1.2 တင်မယ်
Samsung က S2 အတွက် 4.1.2 jelly Bean ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီး ကင်မရာပိုင်းနဲ့ Display ပိုင်းပိုကောင်းလာပြီး feacture အသစ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပြောနေတာကြာပါတယ် တင်နည်းလေး ပြောမယ်နော်။
လိုအပ်မဲ့ ဖိုင်လေး ဒေါင်းမယ်လိုက်ကြမယ် ပြီးမှ ဆက်ကြတာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ....... DVD ဗီဒီယိုခွေ၊ သီချင်းခွေ စသည်ဖြင့် တို့ကို မိမိလိုချင်တဲ့ ဇာတ်ကား သီချင်းတို့ကို ခွေမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာတဲသို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ Format ပြောင်းပြီး ထည့်သွင်းလို့ရတဲ့ WinX DVD Ripper Platinum 7.0.0.66 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... VCD ခွေတွေမှာဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သီချင်း၊ ဗီဒီယိုတွေကို ဒီအတိုင်း ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် DVD ဖိုင်ဆိုရင် မရတော့ပါဘူး DVD Ripper တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်.... ဒါလေးကတော့ converter လိုပါပဲ ခွေမှတဆင့် ကွန်ပျူတာသို့ ပြောင်းလဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial Key ပါဝင်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://www.winxdvd.com/dvd-ripper-platinum/ ကို Click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Dropbox, Box, သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ......
Tornado 3D v1.1 For Andriod (Updated : Jan 18, 2013)